Barruu amaloowwan waliin kanneen sududaan dhaangessuun yookiin akkaataaleetiin faayidaa irra oolan barbaaduu ni dandeessa. Fakkeenyaaf, yoo amala Bocquu barbaadde, miseensotni barruu hundi kanneen bocquu durtii hin fayyadamne ni argamu. Barruun hundi kan amala bocquu sududaan lakkaddaa'e qabu, fi barruun hundi bakkatti akkaataan amala bocquu biliqu, ni argamu.
Yoo maqaatiin bocquu kamiyyuu argachuu barbaadde, qabduu Dhangii qaaqa Barreessaa PRODUCTNAME Argadhuuti Bakka buusi keessaa cuqaasi.
Yoo barruu kan keessatti amalootni sududaan dhaangessamanii fi akkaataalee fayyadamuun qindaa'an barbaaduu yoo barbaadde, sanduuqicha Akkaataalee Dabaluu fili.
Jijjiiramoota bocquu hundaa barbaaduu
Gulaali - Argadhuuti Bakkabuusi fili.
Qaaqa Amaloowwan keessaa, sanduuqa filannoo Bocquu filiitii TOLE cuqaasi.
Bakkeewwan hundaa jijjiiramni bocquu hojiirra oole, sududaan yookiin akkaataa mijaawaa ramaduun, ni argamu.
Haalata Argadhuti Bakkabuusii haaromsi
Barbaacha amaloowwan ammaa dhaabuuf, qaaqa Argadhuuti Bakkabuusi gara haalata baratamootti haaromsi.
Dhangii Malee cuqaasi.
Argadhuuti Bakkabuusi dialog
Galmeewwan barruuf amaloowwan barbaaduun qaaqa Argadhuuti Bakkabuusii keessaa jira.
Title is: Amaloowwan Barbaaduu